Turinabol (Tbol) poda (855-19-6) Vagadziri & Vanotengesa - Fakisi
Turinabol chibereko chakashandiswa zvikuru mumunda wekuvaka muviri. Vatambi vari munharaunda iyi vanobatana nesimba rakasimba-inenge "yepamusoro pevanhu" isu tingati - kudzidzisa maitiro uye kuisa zvakakwirira zvikuru - zvinenge "zvisingagoneki" zvinangwa.
Chinangwa chavo chikuru ndechokubviswa kweadipose tissue uye kukura kwemashuga emisumbu pamwe chete nemuviri wepamusoro weupfumi uye muviri.
Turinabol ndeimwe yezvinhu zvakakurumbira zvakagadzirwa pakati pevarimi vemiti, nokuti sevana anebolic steroid ine simba kwazvo inobatsira kuita basa iri uye inoita zvinangwa zvose zvakagadzirirwa "zvinokwanisika".
Raw Turinabol (Tbol) powder (855-19-6) video
Raw Turinabol (Tbol) powder (855-19-6) Tsanangudzo
Raw Turinabol (Tbol) powder is an anabolic steroid iyo inotora testosterone.Raw Turinabol (Tbol) powder, kuchinja kunokonzera kuti ichi chirwere chisina simba vanabolic chimiro ne minimal androgenic potency. clostebol acetate inoratidzika isina simba anabolic compound inopa zvishoma muhutano hwekuvaka masimba yekukwanisa. Migumisiro inowanikwa nevashandisi vechirwere ichi yaizofanana neaya inowanikwa nokutora mhando dzemitauro ye primobolan, kunyange zvichida isiri yakasimba uye inotaurwa.
clostebol acetate haina kutendeukira kune estrogen uye ikoko kune esrogenic migumisiro yakadai sokuchengetwa kwemvura bloat uye gyno haisi chinhu uye mushumiri haafaniri kunetseka nezvekutora anti-estrogen michina yakafanana arimidex kana aromasin. clostebol acetate ane zvimwe zvakasimba uye androgenic; saka androgenic migumisiro inokwanisika kana uchishandiswa steroid iyi pamadhora akawanda. uyerogenic nemigumisiro inogona kusanganisira zvinhu zvakadai seganda rehuni, acne, uye kukura kwezviso nekwemvere. nokuti harina basa reesrogenic asi rinonyanya uyerogenic, vashandisi vemuzvikamu izvi vanogona kutarisira kuti mutsara wakawana kuva nehutano hwakanaka hwakatarisa. nekuda kweizvi, clostebol acetate yaizoshandiswa nevhudziri vehupenyu vari pedyo nehodhi, kana nevatambi vari mumhanya kana kuti mitambo yakatsetseka.
Raw Turinabol (Tbol) powder (855-19-6) Specifications
Product Name Raw Turinabol (Tbol) powder
Kemikari Name Clostebol acetate; 855-19-6;
muchiso Name Steroid ester
MDL Nhamba MFCD00079075
Molecular Wsere 364.91 g / mol
Kunyorera Point 227.0 ku231.0 deg-C
Kunyanya 108 uye le 119 deg
APane Raw Turinabol (Tbol) powder is steroid anabolic iyo inobva kune testosterone
Chii chinonzi Raw Turinabol (Tbol) powder (855-19-6)?
Turinabol inogadzirwa nevanabolic steroid, inoshandiswa zvakanyanya nevaya vanobatanidzwa mukugadzira muviri, sevateveri nevatambi vemutambo uyu urikudzidzira kushandiswa kwe "superhuman" kusanganisira kuedza kwakasimba kuitira kuti vasvike kune zvinangwa zvavo zvakakwirira.
Vanonyanya kunetseka pamusoro pokubvisa mafuta ane mafuta uye kukudziridza mishonga yemasumbu, zvichiita kuti kuwedzerwa kukuru kweuviri hwemuviri uye b mutsara.
Turinabol iri pakati pezvinyorwa zvinowedzera muzvigadzirwa zvemuviri sezvo zvichionekwa seine simba zvikuru steroidal anabolic chigadzirwa, kudzidzisa kunoratidzika nyore kwazvo uye zvinhu zvose zvisingakwanisi kuwanikwa zvingagoneka.
Iyo Yakananga Turinabol (Tbol) powder (855-19-6) mabasa
Turinabol (2446-23-3) ine simba rakanaka pakuchengetedzwa kwe nitrogen uye protein synthesis pamwe nekusimudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa mumuviri wako. Kune rumwe rutivi, masero matsvuku eropa ayo ane basa rekupa miviri yako miviri ne oxygen kuburikidza neropa rako. Kunyanya masero matsvuku eropa mumutumbi wako muviri iyo steadier ndiyo inopa oxygen nemuviri kune zvikamu zvakasiyana zvemuviri unoita kuti musikana kutsungirira. Zvinhu izvi zvose zvemuviri zvakakosha mumuviri wako sezvazvinovandudza mishonga kupora pamwe nekuwedzera kukura kwemashuga. Ichi ndicho chikonzero nei vatambi vakawanda vachiri kusarudza Oral Turinabol pane dzimwe vanabolic steroids.
Raw Turinabol (Tbol) powder (855-19-6) Dosage
Kufanana nemishonga yose ye-steroid, saka Turinabol, inofanirwa kutorwa munguva yakareba.
Nokudaro, nguva dzekutora uye nguva dzekudzivisa kubva pachigadzirwa zvinofanira kuteverwa.
Chiitiko chekutora Turinabol chinowanzotora 30 mg zuva nezuva kwe1 kusvika kumavhiki e12.
Raw Turinabol (Tbol) powder (855-19-6) zvinobatsira
The anabolic steroid Turinabol inoshandiswa ne bodybuilders munguva yekucheka.
Idzidzo huru dzekudzidziswa ndeyotevera:
kusimbisa kurasikirwa kwemafuta
inodzivirira spleen muscle tissue
kubudirira pakuvandudza nguva nguva
kubudirira kwehutachiona hunokonzerwa nekuderedza kweSBBG
Tenga Turinabol (Tbol) powder kubva kuBuasas.com